Obbo Shimallisii fi obbo Addisuun bakka buutota hawaasaa waliin Dambi Doollootti mari’atan – Fana Broadcasting Corporate
Obbo Shimallisii fi obbo Addisuun bakka buutota hawaasaa waliin Dambi Doollootti mari’atan
Finfinnee, Eebila 11,2011(FBC)- Obbo Shimallis Abdiisaa fi obbo Addisuu Araggaan bakka buutota godina Qeellam Wallaggaa waliin mari’atan.
Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hogganaan Waajjira Giddugaleessaa ODP obbo Addisuu Araggaan jiraattota godina Qeellam Wallaggaa waliin magaalaa Dambi Doollootti mari’ataniiru.
Hirmaattonni waltajjichaa gaaffilee fi yaadota addaddaa kan kaasan yammuu ta’u, hoggantoonnis deebii laataniiru.
Gaaffii siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Oromoon kaasu yeroodhaf qofa osoo hin taane waaraan deebisuuf kutannoo fi xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta’uu hoggantoonni mootummaa naannoo fi ODP kanneen himaniiru.
Rakkoo nageenyaa fi tasgabbii darbee darbee muul’atu furuudhan nageenya ummataa tiksuu fi tasgabbii Oromiyaa waaraan mirkaneessuuf kan hojjetamu ta’uu ibsaniiru.